Shiinaha wuxuu daboolka ka qaadaa sanduuqa sanduuqa jiifka ah ee sharaabaadyada ah sanduuqa sanduuqa wax soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Huaguang
dabool sanduuqa sanduuqa qafisyada jiingado jiingado
jiingado sharaabaad sanduuqa keydinta
Cabir: 35 * 35 * 35cm
Nooca Waraaqaha: jiingado
Dhumucdiisuna: E flut
Faahfaahinta Baakadaha: laba kumbuyuutar oo ku jira polybag ama shuruudahaaga
Est. Waqti (maalmo) 15 17 In lagu gorgortamo
Qaadashada: kuwaas oo ah xulan qalabka baakadaha ku habboon, naqshadeynta baakadaha iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyad xariif ah, loogu talagalay xirxirida alaabta qaabka qaabdhismeedka weelka iyo qurxinta naqshadeynta qurxinta xirmooyinka, illaa midabka baakadka, qaabka, qalabka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee naqshadeynta luqadda, waxay siineysaa badeecadda shakhsiyad gaar ah, laakiin sidoo kale sameynta muuqaal muuqaal ah oo dhammaystiran oo sheyga ah, maadaama shuruudaha macaamiisha ay xukumayaan tayada sarreenka ka soo baxa buunshaha, saamiga naqshadeynta baakadka ee warqaddan, shan dhibcood iyo saddex qaybood oo waaweyn , Waxyaabaha tixraaca loogu talagalay saaxiibada Huaguang.Waxaan sidoo kale isku dayeynaa inaan ku burburinno sanduuqan lagu keydiyo sharaabaadyada jiingadda ah maqaalkan.
Naqshadaynta baakadu waa mashruuc nidaamsan, oo u baahan hanaan cilmiyeed iyo nidaam iyo habab lagu gaadho baakad guuleysata isla markaana loo kordhiyo macaashka marka badeecada suuqa la galiyo. Kaliya qabso dejinta saxda ah ee istiraatiijiyadda wax soo saarka badeecada, iyada oo loo marayo tarjumaadda guuleysiga iyo soo bandhigida naqshadeynta badeecada wax soo saarka iyo isku dhafka fikradda suuq geynta ganacsiga, si loo awoodo in la naqshadeeyo. Sanduuqa sanduuqa jiifka ah ee jiingada ah ma aha hab fudud laga bilaabo naqshadeynta illaa wax soo saarka iyo ugu dambeyntii loo soo bandhigo macaamiisha.
1. Shan qodob oo muhiim ah naqshadeynta baakadka
Shaqada baakadu waa inay ilaaliso alaabada, gudbiso macluumaadka badeecada, ku habboon in la isticmaalo, ku habboon in la qaado, kor loo qaado iibka. Maaddo dhammaystiran, baakidhku waxay leedahay laba dabeecadood oo isugu jira badeecadda iyo farshaxanka. Naqshadeynta baakadka guuleysta waa inuu lahaadaa shanta qodob ee soo socda:
(1) Dareenka shelf
(3) Qaabka muuqaalka
(4) Dareen sumadeed
(5) Sharaxaadda shaqooyinka iyo astaamaha
Waxaan u maleynayaa aragtida ah in sanduuqa sanduuqa jiingado uu qof walba siinayo mid aad u wanaagsan, cagaar dhalaalaya ayaa ah midabkeedu waa mid cod leh, wuxuu ku habboon yahay reerka in la keydiyo si aad u badan, macaan iyo farxad leh.
2. Waxyaabaha muuqaalka ka kooban ee xubno ka mid ah
Muuqaalka muuqaalka waa muuqaalka muuqaalka baakadaha badeecada soo bandhigeysa, oo ay ku jiraan cabbirka dusha sare, cabbirka iyo qaabka. Waxaa jira saddex qaab oo aan ku aragno nolol maalmeedkeenna, kuwaas oo kala ah, qaab dabiici ah, qaab dabiici ah iyo qaab shil ah. Laakiin markii aan baranayno qaabka wax soo saarka, waa inaan helnaa foom lagu dabaqi karo hanti kasta, taas oo ah, inaan soo saarno joogtaynta caadiga ah, oo aan ugu yeerno foomka aan la taaban karin.
Waan ognahay in dastuurka qaabku yahay cunsur qaab, ama kani waa curiye ka mid ah qaababka, qaababka is-beddelaya ee lagu sameeyo habab iyo xeerar gaar ah. Foomku wuxuu ka kooban yahay dhibco, xariiqyo, diyaarado iyo meydad. Noocyada baakadaha badanaa waxaa ka mid ah silsilad, cuboid, koon, qaabab kala duwan iyo iskudhafka foomamka la xiriira, iyo sidoo kale qaabab kala duwan oo ay ka kooban yihiin googoyn kala duwan. Noocyada cusub ee foomamka baakadaha ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya hagida muuqaalka ee macaamiisha, iyo qaababka muuqaalka ee gaarka ah waxay uga tagi karaan macaamiisha aragti qoto dheer oo ku saabsan daabacaadda. Naqshadeeyayaasha baakadaha waa inay yaqaanaan sifooyinka astaamaha foomka iyo muujiyadooda, oo tanna u qaataan inay tahay maaddada lagu muujiyo quruxda foomka.
Markaan tixgelinayno muuqaalada muuqaalka naqshadeynta baakadaha, waa inaan sidoo kale ka fahamnaa xagasha sharciga rasmiga ah ee quruxda. Marka loo eego mabda'a rasmiga ah ee naqshadeynta baakadaha oo ay weheliso astaamaha shaqooyinka badeecada u gaarka ah, arrimo kala duwan ayaa si dabiici ah oo dabiici ah la isugu dari doonaa si loo helo sawir naqshadaysan oo mideysan.
Sanduuqa sanduuqyada jiingado ee jiingado ah wuxuu u qaab eg yahay dabool iyo saldhig. Gelintu waxay ka samaysan tahay jiingado, oo u kala qaybinaya sanduuqa weyn meerisyo yaryar oo ku habboon sharaabaadyada. Sanduuqa noocan ah ayaa aad looga jecel yahay macaamiisha.
3. Walxaha halabuurka
Curisku waa sawir dhammaystiran oo astaan-ganacsi, muuqaallo, qoraal iyo isku-darka dusha sare ee muuqaalka baakadaha badeecadaha. Isku darka afarta dhinac wuxuu siinayaa saameynta guud ee baakadka. Halabuurka nashqadeynta alaabta ee ka kooban walxaha ganacsiga, sawirada, qoraalka iyo midabka isticmaalka saxda, haboon, quruxda badan, waxaa loogu yeeri karaa shaqooyinka naqshada fiican.
Astaanta ganacsigu waa astaan, waa ganacsiga, hay'adda, badeecada iyo astaan ​​kasta oo astaan ​​aasaasi ah. Calaamadaha ganacsiga ayaa ku lug leh siyaasadda, dhaqaalaha, nidaamka sharciga, farshaxanka iyo qeybaha kale. Astaamaha astaan ​​ganacsi waxaa lagu go'aamiyaa shaqadiisa, qaabkeeda. Waxay rabtaa inay ku muujiso nuxurka hodanka ah qaab fudud oo guud oo guud ahaan meel yar, isla mar ahaantaana u baahan kormeeraha inuu fahmo macnihiisa gudaha muddo gaaban. Guud ahaan, calaamadaha ganacsiga waxaa loo qaybin karaa seddex qaab: astaan ​​ganacsi, astaan ​​ganacsi iyo isku darka qoraalka iyo sawirada. Naqshadaynta astaan ​​ganacsi ee guuleysata waa inay noqotaa wax soo saar isku dhafan dabiici ah hal-abuur hal abuur leh. Hal-abuurnimadu waa soo-saarista, falanqaynta, soo-kicinta iyo guud-marinta fikrad gaar ah iyadoo loo eegayo shuruudaha naqshadeynta. Iyadoo loo marayo fikirka falsafada, fikradda naqshadeynta waxaa laga beddelaa muuqaalka muuqaalka ah ee naqshadeynta sawirka la taaban karo.
Sawirka qurxinta baakadaha ayaa badanaa loola jeedaa sawirka badeecada iyo sawirka kale ee qurxinta kaabayaasha ah. Sawirada, oo ah luqadda naqshadeynta, waa in la muujiyo astaamaha gudaha iyo dibaddaba ee sawirka oo ay macluumaadka ugu gudbiyaan macaamiisha qaab muuqaal muuqaal ah. Ujeedadaas awgeed, dejinta saxda ah ee naqshadeynta garaafka ayaa aad muhiim u ah. Nidaamka meelaynta waa habka lagu barto dhammaan waxyaabaha ka kooban alaabooyinka, oo ay ku jiraan nooca badeecadaha, calaamadaha ganacsiga, macnaha magacyada wax soo saarka iyo xaaladda hadda jirta ee alaabooyinka la midka ah iyo arrimo kale oo badan waa inay yaqaanaan oo la darsaan.
Sawirada waxaa loo kala qaybin karaa muuqaallo muuqaal ah iyo sawir gacmeedyo qurxin marka la eego qaababka muujinta.
Adeegsiga farsamooyinka ranjiyeynta, sawir qaadista, iwm. Rinjiyeynta ayaa ah qaabka ugu weyn ee naqshadeynta qurxinta baakadaha, iyadoo la raacayo fikradda guud ee baakadaha loo baahan yahay in lagu sawiro sawirro, alaabada. Marka la barbardhigo sawirka sawirka, waxay leedahay astaamaha xorriyadda doorashada, turxaanbixinta iyo guud ahaan. Rinjiyeynta ayaa ah qaab loo soo bandhigo, loo qurxiyo loona iibiyo badeecadaha. Si kastaba ha noqotee, nooca ganacsiga ee baakadaha badeecada ayaa go'aaminaya in naqshadeynta ay tahay inay muujiso sawirka dhabta ah ee badeecada oo ay macaamiisha siiso muuqaal dareen leh. Sidaa darteed, sawir qaadista ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu muujiyo muuqaalka muuqaalka dhabta ah ee dareenka leh ee baakadaha iyo qurxinta qurxinta.
Waxay u qaybsan tahay farsamooyinka matalaadda iyo kuwa la taaban karo ee muujinta. Sawirro tusaalooyin ah, muuqaallo muuqaal ah, xayawaanno ama dhir ayaa loo isticmaali karaa sawirro muuqaal ah si ay u matalaan waxyaabaha ku jira iyo sifooyinka xirmada. Farsamada soo-gaabinta waxaa loo isticmaalaa burush-gacmeed bilaash ah, isticmaal dhibic aan la taaban karin, xariiq, qaabka qaabka joomatari wajiga, gabalka midabka ama saamaynta muuqaalka si loo sameeyo sawir, kooban, geesinimo leh, leh qaab qaab, sidoo kale noqo farsamada muujinta ugu weyn ee qurxinta baakadka. Guud ahaan, foomka la taaban karo iyo muuqaalka la taaban karo kuma koobna baakadaha iyo naqshadeynta qurxinta, laakiin waa la isku daraa.
Mideynta lahjad ahaaneed ee nuxurka iyo qaabku waa xeerka guud ee naqshadeynta garaafka, hannaanka naqshadeynta, iyadoo loo eegayo baahida loo qabo garaafka, xulo farsamooyinka matalaadda garaafyada u dhigma, si loo gaaro midnimada foomka iyo nuxurka qaabeynta garaafka, abuur waxay ka tarjumaysaa ruuxa da'da, qaabka qowmiyadeed ee khuseeya, dhaqaalaha, shaqada qurxinta qurxinta quruxda badani waa shuruudaha aasaasiga ah ee naqshadeeyayaasha baakadaha.
Sanduuqa sanduuqa jiifka ah ee jiingada leh ayaa iska leh keydinta guryaha. Sidaa darteed, qaabkeedu uma baahna inuu muujiyo dabeecadda astaamaha, laakiin wuxuu u baahan yahay inuu fiiro gaar ah u yeesho naqshadeynta garaafka. Isticmaalka astaamaha kirismaska ​​ayaa sanduuqa ka dhigaya mid aad u raaxo badan.
Naqshadaynta midabku waxay ku fadhidaa boos muhiim ah naqshadeynta baakadaha. Midabku waa qodob muhiim u ah qurxinta iyo iftiiminta alaabada. Isticmaalka midabka baakadaha waa fikradda naqshadeynta sawirka oo dhan, halabuurka ayaa si dhow isugu xiran. Shuruudaha midabaynta Baakadaha ee flatness, homogenization, kani waa midabka miiraha, sifaynta dhererka soo koobid. Waxay ku saleysan tahay isku xirnaanta dadka iyo caadooyinka midabka, buunbuunin heer sare ah iyo midabku waa hab lagu farsameeyo farshaxanka. Isla mar ahaantaana, midabka baakadka sidoo kale waa inuu ku xaddidnaadaa habka, qalabka, isticmaalka iyo aagga iibka.
Hore: Kaarboor adag oo waraaqo ubax ah oo dib loo cusbooneysiin karo loogu talagalay saaxiibtiis
Xiga: Kartoo sanduuqa hadiyad qaab wareega la tayo sare leh sanduuqa dhigay
Khaanadaha Hadiyadaha Khaaska ah
Sanduuqa Baakadaha Naqshadeynta
Khaanadaha Hadiyadaha Qurxinta
CD Waraaqda Box Kaydinta Miiska Qurxinta Orga ...
Sanduuqa Kaydinta Warqadaha Xafiiska Qurxinta / Kaydinta Guriga ...
kartoon khaanad sanduuqa lagu keydiyo warqadda keydinta ee ...
Tayo sare leh miiska daabacaadda daabacan ...
Xafiiska ama sanduuqa keydinta warqadda guriga oo leh dabool ballaaran ...